Bambooyinka qulqulaya, Bambooyinka qulqulaya ee Horizontal, Froth Pump - Boda
Waxaad u baahan tahay qof soo saari kara waxaad rabto oo leh nashqad khaas ah oo ku daabacan faahfaahintaada. Markaa adeegeena OEM/ODM waa adiga!Akhri wax dheeraad ah
Iibso dalab buuxa ka dib markii la ansixiyo tayada alaabta. Markaa adeegeena Dalabka Tusaalaha waa adiga!Akhri wax dheeraad ah
Waxaan jeclaan lahaa inaan booqdo Shiinaha oo aad xiisaynayso inaad nala shaqeyso. Markaa adeegayada Dalxiiska Warshada waa adiga!Akhri wax dheeraad ah
Shirkaddayadu waxay leedahay injineero sare iyo farsamoyaqaanno qadiimi ah. Waxa kale oo ay leedahay xirfado suuq-geyneed oo aqoon sare u leh ganacsiga dibadda oo leh khibrad ballaadhan oo ay ka buuxaan hormuud iyo ruux hal-abuurnimo. Shirkaddayadu waxay codsan doontaa maskaxda "Dadka ku jihaysan, daacadnimada ganacsiga" waxayna buuxin doontaa shuruudaha macaamiisha si degdeg ah oo hufan; Waxa intaa dheer in ay leedahay nidaamka maamulka sayniska iyo dhaqanka shirkadaha adag. Ilaa hadda, macaamiisha shirkadu waxay qaadataa in ka badan 50 gobol iyo degaan. Waxay horey u sameysay shabakad suuqgeyneed oo xooggan, nidaam adeeg oo mudan iyo urur ganacsi oo adag.
Qeybaha Froth-ka ee Horizontal
Mashiinnada saxda ah
SIDA AYNU U SHAQEEYNO
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd diiradda ugu horrayn on wax soo saarka iyo sahayda bambooyin slurry tayo sare leh iyo qaybaha bamka slurry. Matoobyadayada waxaa loogu talagalay deegaanka bamgareynta ugu xun iyo daxalka.Waxay ka samaysan karaan chrome sare, noocyo kala duwan oo elastomer ah ama kuwa ugu dambeeya ee alaabta dhoobada ah si ay u helaan adeeg dheer iyo waxtar sare leh.
Waxay inta badan ka shaqeysaa bamka & qalabka bamka lagu kaxeeyo, qaybaha bamka & iska caabbinta xirashada shubka, kuwa kale mashiinnada Haydarooliga, accessories iwm. Alaabooyinka waxaa ku jira bambooyin slurry, API 610 petrol-saliid & bambooyin kiimikaad, bambooyinka biyaha kuwaas oo leh tobanaan taxane, in ka badan boqol noocyo , kumanaan nooc. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa macdanta, biraha, macdanta dhuxusha, korontada, batroolka, kiimikaad, sahayda biyaha iyo warshadaha dheecaanka iyo wixii la mid ah.
Waa qaybo lagu beddeli karo mid ka mid ah noocyada caanka ah ee adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay ee ganacsiga bamka slurry. Taasi waxay ka dhigan tahay hoos u dhac kale oo ku yimid kharashka macaamiisha sababtoo ah isku dhafka alaabada iyo beddelka qalabka jira. Ma aha oo kaliya Boda waxay bixisaa qiime tartan iyo keenis degdeg ah waxaanu ku faanaa heerka adeega iyo taageerada farsamada ee aanu siino macaamiisheena.
Ma aha oo kaliya in la helo qiimaha ugu fiican iyo bixinta laakiin sidoo kale adeegga ugu fiican. Waxaan u maleynayaa inaad heli doonto in la sameeyo shuraako ka mid ah Shirkadda Shijiazhuang Boda Industrial Pump Company waxay noqon doontaa go'aankaaga ugu fiican ee helitaanka qiimaha dhabta ah ee xallinta dhibaatooyinka bamka slurry.
Shirkaddayadu waxay codsan doontaa maskaxda "Dadka ku jihaysan, daacadnimada ganacsiga" waxayna buuxin doontaa shuruudaha macaamiisha si degdeg ah oo hufan; Waxa intaa dheer in ay leedahay nidaamka maamulka sayniska iyo dhaqanka shirkadaha adag. Ilaa hadda, macaamiisha shirkadu waxay qaadataa in ka badan 50 gobol iyo degaan. Waxay horey u sameysay shabakad suuqgeyneed oo xooggan, nidaam adeeg oo mudan iyo urur ganacsi oo adag.